News – Gniap
မင်္ဂလာပါ။ အသက် (၁၀ နှစ် မှ ၁၆ နှစ်အရွယ်) ကလေးငယ်တွေအတွက် ခရစ်စမတ် ကျောင်းပိတ်ရက်ရှည်များအတွင်း ပြုလုပ်မယ့် ‘Tech Science Camp’ နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးလိုပါတယ်။ ဒီ အစီအစဥ်ကတော့ ကလေးငယ်များအနေနဲ့ နှစ်ရက်တာ တက်ရောက်နိုင်မယ့် အခမဲ့ Camp တစ်ခုပါ။ ဒီ Camp မှာ ဘာတွေ သင်ယူနိုင်မလဲ ။ ကလေးငယ်တွေအနေနဲ့ နည်းပညာ ကို ဘယ်လို အကျိုးရှိရှိ အသုံးချလို့ ရမလဲ ဆိုတဲ့ တွေးခေါ်မှုကို အခြေခံပြီး သင်ယူ လေ့လာနိုင်ပါမယ်။ Camp အတွင်း Mentor တွေနဲ့ အတူတူ ဂိမ်းတွေ ကစားကြမယ်။ ပဟေဠိ တွေကို Programming / Read more…
သင်က လကမ္ဘာပေါ် သွားဖို့ ကြံစည်မနေရင်တောင် သင့်အနေနဲ့ NASA ရဲ့ နည်းပညာတချို့ကို ယူသုံးခွင့် ရှိနေတယ် ဆိုတာ သိပါသလား ? နာမည်ကျော် အာကာသအေဂျင်စီ ဖြစ်တဲ့ NASA က မကြာသေးမီက သူတို့ ရဲ့ 2019-20 edition software catalog ကို ဖြန့်ချီခဲ့ပါတယ်။ ဒီ catalog ထဲမှာဆိုရင် ရာနဲ့ချီသော အလကား ဒေါင်းလုဒ်ရယူ သုံးစွဲခွင့် ရှိတဲ့ NASA developer များရဲ့ software package စာရင်းတွေပါ ပါရှိပါတယ်။ ဒီလို ကမ်းလှမ်းမှုအသစ်တွေထဲမှာ ပါရှိတဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာတချို့ကတော့ Virtual Reality(VR) training platform Read more…
ကျွန်တော်တို့ အားလုံး စိတ်ဝင်တစား စောင့်ဆိုင်းနေတဲ့ အသင်းတွေ ဖြစ်တဲ့ OG Seed နဲ့ Nigma နှစ်သင်းကတော့ Dream League Major – Closed Qualifiers မှာ Best of3ပွဲစဉ် ထိပ်တိုက် ကစားရတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ပွဲချိန်ကတော့ နိုဝင်ဘာလ ၂၉ ရက်နေ့ ၊ မြန်မာစံတော်ချိန် ည ၁၁ နာရီခွဲ ဖြစ်ပါတယ်။ TI 8 + TI9winner တွေ အနီးကပ် ကြီးကြပ်နေတဲ့ OG Seed ပဲ အနိုင်ရမလား ? Read more…